varavarankely varavarana aluminium -- fscyal.com
Aluminum thermal break varavarana sy varavarankely dia iray karazana varavarana & varavarankely izay mampiasa profil aluminium tetezana insulated sy fitaratra insulating, izay manana ny asan'ny fitsitsiana angovo, insulation feo, fisorohana ny tabataba, vovoka sy tantera-drano. Ny coefficient conductivity mafana amin'ny varavarana sy varavarankely aluminium tetezana tapaka dia latsaky ny 3W / ㎡ · K, izay mampihena ny fahaverezan'ny hafanana amin'ny antsasany raha oharina amin'ny varavarana sy varavarankely tsotra, mampihena ny vidin'ny fanafanana eo ho eo 30%
Aluminum Thermal vaky varavarana&varavarankely
Aluminum thermal break varavarana sy varavarankely dia iray karazana varavarana & varavarankely izay mampiasa profil aluminium tetezana insulated sy fitaratra insulating, izay manana ny asan'ny fitsitsiana angovo, insulation feo, fisorohana ny tabataba, vovoka sy tantera-drano. Ny coefficient conductivity mafana amin'ny varavarana sy varavarankely aluminium tetezana tapaka dia latsaky ny 3W / ㎡ · K, izay mampihena ny fahaverezan'ny hafanana amin'ny antsasany raha oharina amin'ny varavarana sy varavarankely tsotra, mampihena ny vidin'ny fanafanana eo ho eo 30%, insulation feo dia mihoatra noho 29 decibels, ary misy rano sy rivotra tsara. Ny iray amin'izany dia ny fampiasana tsipika fametahana hafanana sy profil aluminium mba hamoronana "tetezana insulation" amin'ny alàlan'ny fanokafana nify mekanika, fanendahana, ary ny fizotry ny fihodinana. Ny karazana iray hafa dia ny manindrona akora manalefaka ny hafanana ao amin'ny lava-baravaran'ny hafanana amin'ny profil firaka aluminium., ary avy eo hamafiso sy esory ny metaly tetezana tapaka ho a "tetezana fanamafisam-peo", izay atao hoe a "cast-type" profil-insulating hafanana. Ao amin'ny ChangyYuan Aluminum, ho hitanao ny varavarankely sy ny varavarana aluminiana vaky thermal toy izao: Varavarankely Swing vaovao, Fiarovana ny tontolo iainana multi-fitaratra sy varavarankely mitsitsy angovo, Varavarana sy varavarankely vita amin'ny hazo vita amin'ny aluminium ary varavarana sy varavarankely vita amin'ny aluminium miloko tetezana tapaka.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny varavarankely sy varavarana aluminio thermal break:
1.Ahena ny fampitana hafanana: Ny conductivity mafana ny insulated aluminium tetezana profil dia 1.8 ～ 5W / ㎡ · k, izay ambany lavitra noho ny mahazatra aluminium firaka profil ny 140 ～ 170W / ㎡ · k. Ny conductivity mafana amin'ny rafitra fitaratra hollow dia raisina. Izany dia 2.0 ～ 3,59W / m2 · k, izay ambany lavitra noho ny an'ny aluminium firaka mahazatra 6.69 ～ 6.84W / ㎡ · k, izay mampihena tsara ny hafanana ampitaina amin'ny varavarana sy varavarankely.
2.Misoroka ny condensation: Ny mari-pana amin'ny endriky ny profil miaraka amin'ny tady insulation hafanana dia manakaiky ny mari-pana anatiny, mampihena ny mety hisian'ny hamandoana anatiny condensing eo amin'ny profil ambonin'ny noho ny supersaturation.
3.Mitsitsy angovo: Amin'ny ririnina, ny varavarankelin'ny insulation strip dia mety hampihena 1/3 ny hafanana very tamin'ny alàlan'ny fikandrana; amin'ny fahavaratra, raha misy aircon, ny fikandrana misy insulation strip dia mety ho bebe kokoa Ahena ny angovo very
4.Arovy ny tontolo iainana: Amin'ny alalan'ny fampiharana ny rafitra insulation mafana, azo ahena ny fanjifana angovo, raha mihena ny taratra ara-tontolo iainana noho ny rivotra sy ny hafanana. Mahasoa ny fahasalamana: Ny fifanakalozana hafanana eo amin'ny vatan'olombelona sy ny tontolo iainana dia miankina amin'ny hafanan'ny rivotra anatiny, ny hafainganam-pandehan'ny rivotra, ary ny hafanan'ny rivotra ivelany. Amin`ny fanitsiana ny anatiny mari-pana ny varavarana sy ny varavarankely mba tsy ho ambany noho 12 ～ 13 ℃, tonga ny tontolo milamina indrindra.
5.Ny fampihenana ny tabataba: ny fampiasana rafitra fitaratra poakaty amin'ny hatevin'ny samy hafa sy ny rafitra poakaty ny insulated tetezana aluminium profil dia mety hampihena ny resonance vokatry ny onjam-peo., misoroka ny fampitana feo, ary mampihena ny tabataba mihoatra ny 30dB.
6.loko isan-karazany: Ny profil aluminium misy loko samihafa dia azo amboarina aorian'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny anodizing, famafazana vovoka, ary famafazana fluorocarbon. Aorian'ny fihodinana sy ny fitambarana, ny insulated aluminium firaka varavarana sy ny varavarankely azo atao ho an-trano sy ivelany roa-loko varavarankely amin'ny loko samy hafa.
4.Ny fitaovana aluminium rehetra dia nataon'ny orinasanay, mifehy ny kalitao hatrany am-boalohany.
Tags：varavarana vaky thermal aluminium & varavarankely, varavarana vaky thermal aluminium & Window Manufacturer, varavarana vaky thermal aluminium & mpamatsy varavarankely, profil aluminium, mombamomba ny aluminium indostrialy